Posted by ငြိမ်းဝေ at 10:24 PM
သူမ December 1, 2009 at 3:25 AM
ဒီအခန်းကိုတောင် ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဖတ်ရပါပကော ဆရာ။
အခန်း (၁၈) နောက်ဆုံးခန်းကို ဘယ်လိုအားနဲ့ ဖတ်ရပါ့။
“ခင်ဝေက မြင်းလှည်းကို အိမ်ဘက်ပြန်မောင်းခိုင်းရင်(မသွားတော့ဘူးဆိုရင်) ကိုကိုကရော (သူ့အသက်သေတဲ့ကြေကွဲပါစေ၊ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသွားမယ်ဆိုတာကို ငြင်းပြီး) လက်ခံနိုင်မှာလား”
စာမေးပွဲရှိလို့ နောက်အပတ်မှပဲ (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်) ကောမန့်အရှည်ကြီး လာရေးဦးမယ်။
မီးမီးချစ် December 1, 2009 at 5:18 AM
နှစ်ယောက်လုံးကို သနားတယ်.. အဲ့လို မဖြစ်လာရင်ကောင်းမှာ
wai zin December 2, 2009 at 1:00 AM
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုဖတ်ဖို့ အားမွေး၇ပါဦးမယ်..သံသယဆိုတာ အ၇မ်းကြောက်စ၇ာကောင်းပါတယ်...ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်၇င်ကောင်းမယ်..း)
Sint Si December 2, 2009 at 10:15 PM
I want them to talk face to face. You cannot tell for sure until you see it with your eyes. I am excited to read for the end part.Thank you!